Campaign yevaMuslim veUighurs muChina / Kodzero dzevanhu
7. April 2016 Oliver Bienkowski
Pixel Munyaradzi inotsigira rusununguko rwevaUighurs, Hong Kong, Taiwan & Tibet
Chirangaridzo cheUighur muMarrakech
AMusi waChikunguru 29.07.2019th, 1 tinoburitsa vhidhiyo yekutanga yechirangaridzo cheUighur mu #Marrakech, isu takanyorera kumapepanhau ese eArab zvataive taita uye hatina kuwana mhinduro chete mushure mekunge taudza mapepanhau kuti mutsara wekutanga wechiyeuchidzo ndewevaJudha veungochani vakasara. chirangaridzo se "Holocaust Chirangaridzo cheMarrakech" munhoroondo yeMoroccan. Kuvenga kubatana nekubatana nemaMuslim Uighurs kwakakunda. Kusvikira nhasi, hapana nyika yeMuslim mupasi rose inotsigira maUighurs sekuda kwavo. Ndinovimba mumakore zana chiyeuchidzo chekutanga cheUighur Muslim Turkic vanhu chichava shanduko mukubatana kwenyika dzeMuslim nemaUighurs.
Pamwechete isu tinoda kuvaka zvakare chivakwa chiri chose chakaparadza China mune dzimwe nyika uye chichiisiya kune imwe nyika nechinangwa chekusarega China ichiparadza tsika yeUighur.
Dai maChinese aizoputsa machechi chiuru, paizova nehasha huru muEurope. Moto mune cathode ray unogona kuvesa kubatana kwepasirese pano. 1000 mamosque & machechi echiKristu akatoparadzwa muChina Isu takapa maUghur ese kuti vavakezve sekopi chaiyo kunze kwenyika kuti vagadzire kubatana kwevanhu vakadzvinyirirwa vechiMuslim pasirese. Nehurombo, mazhinji emaUghur ari kutiza kana mumisasa yekuChina yekudzidzisazve uye varombo. Ndosaka takagadzira GoFundme fundraiser. Zvichienderana nemari yatinotora, tinogona kuvaka raibhurari, mosque kana guva.
China yakaparadza pamusoro pe3 mamoski, makuva & nzvimbo dzinoyera mumakore matatu. Beijing zvakarongeka zvinoparadza tsika nechitendero chevaMuslim Uyghurs. Mifananidzo yesatellite inoratidza mufananidzo unotyisa. Pixel Munyaradzi achaisa muenzaniso uye kuvakazve rakaparadzwa Iman Asim guva mumakomo eMoroccan ane chikwangwani chekurangarira kuparadzwa nemaChinese. Mamwe ruzivo nezve chirongwa
Tinoda democracy muChina. Uye uine nyika dzeUyghurs, Hong Kong, Taiwan & Tibet. Bato reCommunist rinofanira kuparadzwa nekukasira. Chiedza chinoratidzira njiva
Tinoda rusununguko rwekunamata muChina, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu & sarudzo dzedemokrasi remangwana rakanaka. Yese mamosque inofanirwa kuvakwazve nemubhadharo weChina, ese iwo #Uiguren Unofanirwa kuva wakasununguka kuti udzidzise kutenda kwako.
Pose apo Europe inodedera, Uighure inodedera kutambudzwa. MuChina, Islam inorambidzwa, kurota kwekarurama-wing idiots. Misoro ye200 yakaparadzwa, maChina vanoda kuziva nezvegarnix. Iko kuvhara kweUighurs, uye kuseka muchikanda. Chero ani anotenda muna Allah muChina, anotora vana vanopambwa kubva kurara.
Uyezve maMuslim ese aenda, anodaro Xi Jinping izvo zvakange zvakanaka. Nekuti ndakatarisa zvese zvataurwa, asi China mari iwe unogona kunge unayo. Asi wobva wataridzika sekunge kure, zvakadaro, iyo Uigure iri mumarara. Korani ndiyo tikiti yeyeti yemisasa yemasisitimu ekutambudza nguva.
Akachenesa uropi hweYeghurs, Mohammed aisatendera izvozvo. Kwira kumusoro kumadziro eChina uye kurara pasi, mukumirira. Aizotumira vatasvi vake kuHong Kong, Tibet uye mberi uye mberi. MaMuslim ese aunganidzwa kumashure uye Xi Jinping aizoverengeka. MuChina kune ipapo democracy uye haazombofi zvakare Islamophobia.
Nekudzoka kwemisasa yezvekudzidzirazve uye nekucherechedza zvakanyanya, hurumende yeChinese iri kuedza kudzivisa kusagadzikana mupurovhinzi. Kuvapo kwezvivako zvakadaro kwakasimbiswa nehurumende munaOctober 2018, asi panguva imwechete yakaramba zvirevo izvi zvekubatwa zvisina kunaka ikoko.
Kune maUighurs, muMuslim Turkvolki mudunhu reChina reXinjiang, zvakawanda zvachinja mumakore achangopfuura (foto kubva ku22.09.2013, matongo emusikiti wakabviswa muKashgar). Asi kunyange hutungamiriri hwezvematongerwo enyika muBeijing hwaifanira kuziva kuti dunhu rakakura kwazvo muWest of the People's Republic harina kubatika.
Zvematongerwo enyika zveChinese muXinjiang zvakafanana neavo vari muBuddhist Tibet: dzinza Chinese uye makambani avo anotarirwa. Ndivowo ivo vanobatsirikana zvakanyanya kubva kuhurongwa hwehurumende yezvivakwa pamwe nekudyara. Kuchikoro, mitauro yemuno iri kupihwa mbichana neMandarin. Saka maUighurs ari kutizira kuchinamato kuti achengete chitupa chavo. Kana hurumende ichiramba ichidzvinyirira chiIslam, ndipo pazvinonyanya kuita.
Isu tinodaidzira kuburitswa kwazvino kwemaUghurs & nesumo
rusununguko rwechitendero muChina. Wese munhu anogona kutenda zvavanoda, mune inobhururuka spaghetti chikara kana mune chimwe chezvitendero zvepasirese. China inofanira kurega kudzivirira vanhu vayo kushandisa rusununguko rwekunamata. Rusununguko rwechitendero chimwe chikamu chebumbiro reGerman - bumbiro reChinese rinofanira kutora izvi semuenzaniso.
Campaign yevaMuslim veUighurs muChina / Kodzero dzevanhu February 24th, 2021Oliver Bienkowski